FANJAKAN' I MADAGASIKARA: août 2010
RAFITRY NY FANJAKAN' I MADAGASIKARA:
Lalàm-panorenana manaja an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, ary mifototra amin' ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaiky fa Jesosy Kristy no Mpanjakan' ny mpanjaka sy Tompon' ny tompo, manaja ny Soatoavina sy ny Kolotsainam-pirenena.
I. ANARANA: FANJAKAN' I MADAGASIKARA.
II. RAFITRA: FANJAKANA (fa tsy repoblika intsony).
- Fanjakana Foibe:
- Fanjakana isam-paritra:
III. VONDRONA ITSINJARAM-PAHEFANA:
- Mpanjaka no Filoham-Panjakana (voafidin'Andriamanitra).
- Fihaonamben’ ny Ampanjaka manerana an' i Madagasikara.
- Filankevitry ny Rovam-Panjakana.
2. FILANKEVITRY NY MPISORONA.
(tsy miankina amin' ny fitondram-panjakana)
3. ASA MPANAO LALANA:
- Antenimieran’Andriana (na Raiamandreny isam-poko fa tsy antoko politika).
- Antenimieram-Bahoaka (Solontena isam-poko fa tsy antoko politika).
4. ASA FITSARANA:
- Fitsarana Nenti-Paharazana (Dina).
- Fitsarana Vaovao (Tribonaly).
5. ASA MPANATANTERAKA:
- Ny Governemanta: Praiministra sy Ministra Roambinifolo ary miampy Sekreteram-Panjakana.
- Ny Rantsa-mangaika ny Governemanta amin' ny Fanjakana isam-paritra.
6. FILANKEVITRA MIKASIKA NY KOLOTSAINA SY TOE-KARENA ARY FIARAHA-MONINA.
- Filankevitra ara-Kolotsaina (Akademia, Federasiona ny Mpanakanto, Fivondronan'ny Mpampianatra Oniversite, ny Mpahay Tantara sy Fomba, ny Mpikabary ...)
- Filankevitra ara-Toekarena (Sim, Fivpama, Holalfitry sy Fivondronan' ny Mpanao Hai-Trano, ny Injeniera, ny Mpivarotra ny Mpiasa, ny Tantsaha...).
- Filankevitra ara-Piaraha-monina (Holafitry ny Dokotera, ny Paramed, ny Mpisolovava, Fivondronan' ny Mpianatra, ny Mpiasa, ny Tanora, ny Mpiaro ny Tontolo iainana, Pnosc, Ccoc, Cnosc...)
(misy ny federasiona, vondrona, syndicats, holafitra, fivondronana, fihaonamben' ny mpiasa isan-karazany rehetra).
- Fepetra iraisana amin' ireo tompon'andraikitra rehetra: Olona manaja an'Andriamanitra Andriananahary, mandeha amin' ny Fahamarinana, tsy manao kolikoly, tsy mpivarotra tanindrazana.
"Dia ho FANJAKA-MPISORONA sy ho FIRENENA MASINA ho Ahy hianareo"(Eksodosy 19:6).
"MITSANGANA, MIHAZAVA, fa TONGA NY FAHAZAVANAO, ary NY VONINAHITR' I IHWH EFA MIPOSAKA AMINAO" (Isaiah 60:1).
Filohan' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka sy ny Zanakandriana eto Madagasikara.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 14:19 Aucun commentaire:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA: FIRENENA MANAN-KARENA INDRINDRA ERAN-TANY
FANJAKAN' I MADAGASIKARA:
TOE-KARENA: FIRENENA MANANKARENA INDRINDRA ERAN-TANY :
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra dia hajorony eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona. Madagasikara Tany Masina, Ilay Tany Fototra, dia tena handroso amin’izay.
Eto no firenena manankarena indrindra eran-tany, misy ny tahiry solitany lehibe indrindra eran-tany, misy ny tahiry volamena sy vatosoa betsaka sy tsara indrindra eran-tany, izay misy karazany fito-polo mahery (diamond, saphir, rubis, émeraude, pezzotaite, schiavinatoite, londonite, alexandrite, labradorite, améthyste, jaspe, grenat, demantoide, tourmaline, morganite, chrysobéryl, citrine impériale, topaze, quartz, cristal, sns...),
misy ny karazana akora rehetra ambonin’ ny tany ao anaty ny fisokajiana nataon’ i Mendeleev sy harena ankibon’ ny tany maro (Argent, Charbon, Chrome, Cobalt, Fer, Gaz naturel, Ilménite, Mercure, Nickel, Niobium, Or, Pétrole, Platine, Plutonium, Rhodium, Uranium, Titane, Thorium,...sns), misy zavamaniry tranainy indrindra eran-tany sy mahasitrana ny aretina isan-karazany.
Fa tsy hisy intsony orinasa vahiny hitrandraka ny harenam-pirenena. Ary voaozona hatramin’ ny tarànany ny tompontany sy ny vahiny izay mangalatra ny haren’ny firenena sy mivarotra tanindrazana, indrindra ireo nosy manodidina antsika.
Mahatratra 100.000 Milliards Dollar US no sandan’ ny harena eto raha kely indrindra. Ary 10 Milliards Dollar US isan-taona no vola mety ho azo amin’izany raha kely indrindra rehefa vokarina eto, ary tsy azo hamidy any ivelany raha tsy efa voakaly eto Madagasikara.
Hajoro ny Bankim-pirenena hiaro ny tombontsoam-pirenena. Hajoro ny Orinasam-panjakana maro hitrandraka ny harena goavana an-kibon’ ny tany, ary ny tompontany no mitantana azy ireo am-pahamarinana. Ny teknolojia sy ny teknisiana no mety ilaina ny avy any ivelany. Ary ho lasa firenena anisan’ ny matanjaka sy mandroso indrindra eran-tany tokoa i Madagasikara !!!
Ny Andriana Rev. Dr Ndriana RABARIOELINA,
Mpitarika NY FIHAONAMBE NY AMPANJAKA SY NY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 14:16 Aucun commentaire:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA: HO FIRENENA VOALOHANY FA TSY HO FARANY:
Ara-tantara dia firenena anisan’ny natanjaka indrindra eran-tany ny Fanjakan’ i Madagasikara, tamin’ ny Taonjato faha-19, izay neken’ ny firenena vahiny, toa an’i Etazonia, Frantsa, Alemana, Angletera, ary mbola teo alohan’ i Japana.
Taorian’ ny Konferansa tany Berlin (1884-1885) anefa, izay nivorian’ ireo firenena tandrefana mpanjanatany (Alemana, Angletera, Aotrisia-Hongria, Belzika, Danemark, Espana, Etazonia, Hollanda, Italia, Lafrantsa, Portiogal, Rosia, Soeda, Torkia),
dia tonga teto ny mpanjanantany frantsay ary nopotehiny ny firenena, nampijaliany sy notifiriny ary novonoiny ny tompontany an-tapitrisa, ary nangalariny ny tany sy ny harem-pirenena teto Madagasikara, nandritra ny efatra amby enim-polo taona (1896-1960), harena izay mahatratra 100 Milliards Dollar US mahery, izay tsy maintsy haverin’ ilay firenena mpanjanantany.
Napetraky ny mpanjanantany frantsay ny Rafitra Repoblikana, laika, demokratika (1960-2009), izay kolotsaina vahiny tandrefana, miaraka amin’ ny resaka Antoko Politika sy Demokrasia ary ny fandàvana an’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary, YHWH, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, rafitra repoblikana nentin’izy ireo nampiadiana ny tompontany sy nampahantrana ny firenena iray manontolo, sy nanohizan’ izy ireo ny fangalàrana sy ny fandrobàna ny harem-pirenena ary ny fanapotehana ny firenena. 10 Milliards Dollar USD no vola very raha kely indrindra, nandritra ny dimam-polo taona farany, vokatry ny famoahana antsokosoko ny harena teto.
Ny filohan’ ny repoblika efatra nifandimby, teto amin’ ny firenena, dia voaongana hatrany satria: na saribakoly nolalaovin’ ny vahiny, na nandroba ny harem-pirenena, na nivarotra tanindrazana, na nampijaly sy nitifitra ary namono vahoaka, na niasa fa tsy nahavita, ka tonga amin’izao faha-dimam-polo taonan’ ny fahantran’ ny vahoaka izao. Ary izay mbola mieritreritra Repoblika dia mbola tratran' ny velapandriky ny mpanjanatany, voaozona ary tsy maintsy hirodana hatrany.
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, nolazainy tamin’ ny mpanompon’Andriamanitra vitsy, dia hirodana ny sivilizasiona tandrefana satria mandà sy manohitra an’ i Zanahary, YHWH, Andriamanitra Andriananahary, Mpamorona ny Lanitra sy ny Tany, indrindra ny namoaka lalàna mankasitraka zavatra mamoafady. Ary ho haverin’ i Zanahary amin’ i Madagasikara ny Nosy rehetra izay azy fahiny (Bassas da India, Europa, Juan de Nova, Iles Glorieuses, Tromelin, Comores, Mayotte, Diego Garcia, La Reunion…).
Ary hiverina amin’ i Madagasikara ny harena rehetra izay navoaka teto, tamin’ ny tsy fahamarinana, fa ozona kosa ho an’izay olona na firenena mitazona izany harena izany, na iza na iza, ary na aiza na aiza misy azy, ka tsy mamerina azy eto Madagasikara.
Ary ho hajoron’ Andriamanitra YHWH eto Madagasikara tsy ho ela intsony ny SIVILIZASIONA VAOVAO, ny RAFI-PIARAHAMONINA VAOVAO, ny OLOM-BAOVAO, manaja an’ i Zanahary YHWH sy ny Soatoavina ary ny Kolotsainam-pirenena:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKA-MPISORONA sy FIRENENA MASINA (Eksodosy 19:6), fanjakana miorina amin’ny Baiboly Tenin'Andriamanitra, manaja ny Fianakaviana sy ny Soatoavina Fito (Fanajàna an'Andriamanitra, Hasina, Fahamarinana, Fihavànana, Firaisankina, Tanindrazana, Fiandrianam-pirenena), mankatoa an' i JESOSY MASINA, MPANJAKAN' NY MPANJAKA SY TOMPON' NY TOMPO, ary ho lasa firenena mandroso, anisan’ ny ho voalohany indrindra eran-tany i Madagasikara !!!
Hoy Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany: "...dia hahatonga anao HO FIRENENA LEHIBE AHO sady HITAHY ANAO sy HAHALEHIBE NY ANARANAO; ary HO FITAHINA TOKOA IANAO; ary HITAHY IZAY MANISY SOA ANAO AHO, fa hanozona izay manozona anao; ary AMINAO NO HITAHINA NY FIRENENA REHETRA AMBONIN'NY TANY" (Genesisy 12:2-3).
"Dia hataon'i YHWH ho LOHANY IANAO, fa tsy ho rambony; ary HO AMBONY TOKOA IANAO, fa tsy ho ambany, RAHA MIHAINO NY DIDIN' YHWH ANDRIAMANITRAO, izay andidiako anao anio, KA MITANDRINA SY MANARAKA AZY" (Deotoronomia 28:13).
Antananarivo, 21 Jona 2010.
Filohan' ny Fiombonamben' ny Zanakandriana sy Ampanjaka eto Madagasikara.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 14:11 10 commentaires:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA : HITONDRA SIVILIZASIONA VAOVAO
FANJAKAN' I MADAGASIKARA : HITONDRA SIVILIZASIONA VAOVAO :
Araka ny Teny Fikasan’ Andriamanitra, nolazainy sy nampitondrainy tamin’ ny olon’Andriamanitra vitsy, efa am-polo taona lasa izay, dia hajoron’ Andriamanitra eto ny Fanjakan’ i Madagasikara, fanjakam-pisorona, ary tsy misy olombelona na vondron’olona na firenena vahiny afaka ahasàkana izany.
Hirodana ny sivilizasiona tandrefana mandà sy manohitra an’ i Zanahary. Hajoron’Andriamanitra handimby azy ny Sivilizasiona Vaovao eto Madagasikara sy ny Fanjakan’ i Madagasikara, ary haposak’ Andriamanitra eto Madagasikara ny Fahazavàny ka hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany.
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, dia Tany Masina i Madagasikara, Ilay Tany Fototra, ary nametrahan’ i Zanahary taranaka voafidy, fanjakam-pisorona sy firenena masina (Eksodosy 19:6), nantsoin’Ilay Nahary amin’ ny anarany ho olon’Andriamanitra mba hanehoany ny Voninahiny ary mba hanehoan’ izy ireo ny Voninahitr’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany.
Araka ny Teny Fikasan’Andriamanitra, raha mitandrina ny Didin’Andriamanitra isika dia ataon’Ilay Mpahary ny Lanitra sy ny Tany ho firenena voalohany fa tsy ho farany, ho lohany fa tsy ho rambony, ho ambony fa tsy ho ambany, hampindrana fa tsy hindrana, hampisambotra fa tsy hisambotra, handresy fa tsy ho resy, ho feno fitahiana fa tsy ho feno fahantrana intsony (Deotoronomia 28: 1-13).
Hanafaka ny firenena Andriamanitra, amin’izao Taon-Jobily izao (Levitika 25:10), Taona faha-Dimam-Polo (26 jona 1960 – 26 jona 2010). Hanafaka amin’ ny asan’ ny maizina, ary hanaposaka ny Fahazavan’Andriamanitra eto amin’ ny firenena. Satria Andriamanitra dia Fahazavàna. Ary tsy misy vondron’olona na firenena vahiny ahasàkana izany !
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 14:01 Aucun commentaire:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA : NY RAFI-PIARAHA-MONINA
FANJAKAN' I MADAGASIKARA, FANJAKAM-PISORONA :
Lalàm-panorenana manaja an' i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Kolotsaina eto Madagasikara (3):
4. NY FOTOTRA FITO IORENAN’ NY RAFI-PIARAHA-MONINA:
Ary ireto avy ireo ambaratonga iorenan’ ny rafi-piaraha-monina araka ny tantara nandritra ny arivo taona maro mifanesy, araka ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena eto Madagasikara:
1) Ny OLOM-PIRENENA.
2) Ny FIANAKAVIANA, izay fototry iorenan’ ny rafi-piaraha-monina eto amin’ ny firenena.
3) Ny FIANAKAVIAMBE, izay fitambaran’ ny fianakaviana maro avy amin’ ny razambe iray.
4) Ny ZANA-POKO, izay fitambaran’ ny fianakaviambe maro.
5) Ny FOKO, izay fitambaran’ ny zana-poko maro.
6) Ny FOKOM-PIRENENA, izay fitambaran’ ny foko maro ao anatin’ ny fanjakana nentim-paharazana.
7) Ny FIRENENA, izay fitambaran' ny fokom-pirenena maro.
Miainga avy amin’ ireo fototra fito ireo no hamonjena ny firenena.
Ary avy amin‘ ireo fototra fito ireo no ipoiran’ ny ambaratonga fito amin’ ny vondrona itsinjaram-pahefana eo amin’ ny firenena, iorenan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA dia :
1) Ny FOKONTANY.
2) Ny FIVONDRONAM-POKONTANY.
3) Ny FIRAISANA na Kominina
4) Ny FIVONDRONANA.
5) Ny FARITRA.
6) Ny FANJAKANA ISAM-PARITRA, izay fanjakana nenti-paharazana ara-tantara manerana ny Nosy.
7) Ny FANJAKANA FOIBE, izay mandrindra ny asam-panjakana rehetra.
Avy amin’ ireo rafitra ireo no hampandrosoana ny firenena.
FEHINY: Ny anto-pisian ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, dia ny hanehoan’ i Zanahary, Andriamanitra Andriananahary ny Voninahiny, ary mba hisian’ ny tena fampandrosoana marina, azo antoka, mirindra, mifandanja, isam-paritra, mafy, ary maharitra, eto amin’ ny firenena, tsy ho an’ olombitsy intsony, fa ho tombontsoan’ ny firenena iray manontolo.
Teny Fikasan’ Andriamanitra ny fijoroan’ ny FANJAKAN’ I MADAGASIKARA, Fanjakam-pisorona, ary hiposaka eto Madagasikara ny Fahazavàn’Andriamanitra ary hipaka hatrany amin’ ny faran’ ny tany !
“Fa hianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain’Andriamanitra ho an’ ny tenany, mba hilazànareo ny hatsaran’ Ilay niantso anareo hiala tamin’ ny maizina ho amin’ ny Fahazavàny mahagaga, ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon’Andriamanitra, izay tsy namindràna fo, fa ankehitriny efa namindràna fo “.
HO AN' I ZANAHARY IRERY IHANY NY VONINAHITRA !
Antananarivo, faha-07 Jona 2010.
Mpitarika NY FIHAONAMBEN’ NY AMPANJAKA SY NY ZANAKANDRIANA ETO MADAGASIKARA.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 13:55
FANJAKAN' I MADAGASIKARA: NY FOTOTRY NY FIARAHA-MONINA
FANJAKAN' I MADAGASIKARA :
Lalàm-panorenana manaja an' i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Kolotsaina (3):
Ny Andriana Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA ,
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 23:11 Aucun commentaire:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA, MANAJA AN' ANDRIAMANITRA SY NY SOATOAVINA MALAGASY:
Lalàm-panorenana manaja an'i Zanahary sy ny Soatoavina ary ny Fahendrena nenti-paharazana eto Madagasikara:
3. NY FOTOTRA FITO IORENAN’ NY SOATOAVINA SY NY KOLOTSAINAM-PIRENENA:
Ny fototra fito iorenan’ ny soatoavina sy ny kolotsaina ary ny satam-pirenena nandritra ny arivo taona maro nifanesy, eto amin’ ny tany sy ny firenena, dia ireto avy:
1) NY FANAJANA: Ny fanajàna an’ i Zanahary no voaloham-pahendrena. Manaraka izany, ny fanajàna ny Mpanjaka izay Filoham-panjakana, ny Ampanjaka, ny zokiolona, ny raiamandreny, ny olon-dehibe, ny tanora, ny ankizy, ny mpiara-belona, ny fanànan’ ny tompontany, ny vakoka isan-karazany, ny harem-pirenena ary ny tontolo iainana.
2) NY HASINA: Izay hery tsy hita maso avy amin’ i Zanahary, ary omeny ny olom-pirenena tsirairay avy, ary mbola avo sy sarobidy noho ny zon’olombelona, ka tokony hajaina hatrany. Ny Hasin’ ny Tanindrazana satria Masina ny Tanindrazana, ka tokony hajain’ ny rehetra, ary tsy azo alain’ ny vahiny na omena na hatakalo na hamidy amin’ izy ireo. Ny Hasin’ ny Tenindrazana, izay tenim-pirenena tranainy indrindra eran-tany, avo lenta, ka tokony andrianina hatrany eto amin’ ny firenena. Ary indrindra ny Hasin’ ny Zava-boary noforonin’i Zanahary eto Madagasikara. Zava-boary izay anisan’ ny tranainy indrindra eran-tany, koa mila arovana haingana sy tanteraka mba tsy ho lany tamingana. Aoka izay tena ilaina ho an’ ny olompirenana ihany no ampiasaina amin’ ny fomba tsy manimba ny tontolo iainana. Ary adidy masina ny fandraisan’ anjara ny olom-pirenena rehetra amin’ ny famerenana an’ i Madagasikara, Ilay Tany Fototra, ho feno ala maitso.
3) NY FAHAMARINANA, eo amin’ ny fisainana, ny fiteny, ny fihetsika, ny atao, ary indrindra amin’ ny fitsarana: tsy mitanila, tsy miangatra, tsy mandainga, ary manaraka ny rariny sy ny hitsiny. Mba ho olompirenena mijoro amin’ ny fahamarinana hatrany. Satria Andriamanitra dia Fahamarinana. Ary aza adino ny fanajàna ny Fitsarana nenti-paharazana, izay iainana mandraka ankehitriny, ary miainga amin’ ny dina sy ny soatoavina isan-karazany eo amin’ ny fiaraha-monina.
4) NY FIHAVANANA, amin’Andriamanitra voalohany indrindra, ary manaraka izany ny fihavànana eo amin’ ny mpiara-belona, indrindra eo amin’ ny samy tompontany, mahay mifankatia, mba hisian’ ny fiaraha-monina mirindra (fa tsy fihavanan' ny mpangalatra).
5) NY FIRAISANKINA, eo amin’ ny samy tompontany. Samy mandray anjara ny olom-pirenena rehetra, araka ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta nomen’ i Zanahary, ho amin’ ny zavatra tsara hatrany, tsy mifanitsaka na mifampitsabaka, fa mifameno, ho famonjena sy ho fampivoarana ny olom-pirenena tsirairay, ary ho fampandrosoana ny firenena sy ny tanindrazana.
6) NY FIAROVANA NY TANINDRAZANA, izay nomen’ i Zanahary ho antsika tompontany. Firenena anisan’ izay manankarena indrindra eto ambonin’ ny tany i Madagasikara. Anjarantsika tompontany ihany no mitrandraka ny harenan’ ny firenena, ny manodina ny akora ho voakaly, izay vao mivarotra azy eto an-toerana, na any ivelany raha ilaina izany. Homen’ i Zanahary antsika ny zavatra rehetra ilaina ny amin’ izany. Ary haverina amin' ny malagasy ny tany sy trano ary harena nangalarin' ny vahiny rehetra (karana, sinoa, vazaha, afrikana, ...).
7) NY FIAROVANA NY FIANDRIANAM-PIRENENA, izay adidy sy andraikitry ny tompontany rehetra, manomboka eo amin’ ny Fokontany ka hatrany amin’ ny Fanjakana Foibe. Fa hoy Jesoa Tompo: Ho fongorana izay rehetra manohitra an’ Andriamanitra eto Madagasikara ! Tsy misy olona mahay mifandahitra amin’ ny hevitr’Andriamanitra !
Lehiben' ny Fiombonamben' ny Ampanjaka eto Madagasikara.
Publié par FANJAKAN' I MADAGASIKARA à 15:21 Aucun commentaire:
FANJAKAN' I MADAGASIKARA: FIRENENA MANAN-KARENA I...
FANJAKAN' I MADAGASIKARA: HO FIRENENA VOALOHANY F...
FANJAKAN' I MADAGASIKARA : HITONDRA SIVILIZASIONA ...
FANJAKAN' I MADAGASIKARA: NY FOTOTRY NY FIARAHA-MO...
FANJAKAN' I MADAGASIKARA, MANAJA AN' ANDRIAMANITRA...